ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်(၃)ဦးအတွဲ အပိုင်း(၂)
15 Oct 2018 . 5:32 PM
နာမည်ကြီး ပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းက ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးတိုက်စစ် (၃)ဦးအတွဲ (၁၀)တွဲကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ အဆင့်(၁၀)ကနေ (၆)အထိကို အပိုင်း(၁)ဖော်ပြခဲ့ပြီး အခု အပိုင်း(၂)အဖြစ် ဆက်လက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
၅.Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale (ရီးယဲလ်-၂၀၁၄၊ ၂၀၁၆)
ရီးယဲလ်အသင်း ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ပြန်လည်ဦးမော့လာတာဟာ စီရော်နယ်လ်ဒို၊ ဘန်ဇီမာ၊ ဂါရတ်ဘေးလ်တို့ရဲ့ BBC တိုက်စစ်အတွဲကြောင့်လို့ ပြောရင် မမှားဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ အသီးသီး ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့် ဒီ(၃)ဦး တွဲဖက်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲ အများကြီး မရှိခဲ့ပေမယ့် BBC တိုက်စစ်ပွဲထွက်ခဲ့တဲ့ ပွဲတိုင်းလိုလို ရလဒ်ကောင်း ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
၄.Johan Cruyff, Pat Keizer and Johnny Rep (အေဂျက်စ် – ၁၉၇၃)
၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ အေဂျက်စ်အသင်း ဥရောပဖလားဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး အဲဒီအောင်မြင်မှုမှာ ခရာကျခဲ့တာက ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်၊ ပက်ကိုင်ဇာ၊ ဂျွန်နီရက်ပ်တို့ တိုက်စစ်အတွဲပါပဲ။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို (၁-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ သူတို့(၃)ယောက်က အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီး အနိုင်ဂိုးကို ဂျွန်နီရက်ပ်က ပွဲအစ(၅)မိနစ်မှာပဲ သွင်းယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီရာသီကုန်မှာပဲ ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်က ဘာစီလိုနာကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့လို့ အေဂျက်စ်အသင်းရဲ့ Deadly Trio တိုက်စစ်အတွဲအဖက် ပျက်သွားခဲ့ရပါတယ်။
၃.Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Wayne Rooney (မန်ယူ – ၂၀၀၈)
မန်ယူအသင်းကို ဖာဂူဆန် Alex Ferguson ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ရှရင်ဂမ်-ဒွိက်ယော့ခ်-အန်ဒီကိုးလ် တို့ပြီး ဒုတိယအကောင်းဆုံး တိုက်စစ်အတွဲအဖက်လို့ သတ်မှတ်ရမယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ မန်ယူအသင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ကိုင်မြှောက်ခဲ့တာဟာ စီရော်နယ်လ်ဒို၊ တီဗက်ဇ်၊ ရွန်နီတို့ရဲ့ World Class Attacking Play တွေကြောင့်ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ကစားပုံတွေကတော့ မန်ယူပရိသတ်တွေအတွက် အမြဲတမ်းလွမ်းစရာဖြစ်နေဦးမှာပါ။
၂. Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez (ဘာစီလိုနာ -၂၀၁၅)
MSN တိုက်စစ်ကတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်အတွဲအဖက်လို့တောင် သတ်မှတ်ရမှာပါ။ တစ်ဦးချင်းခြေစွမ်းသာမက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုအပိုင်းမှာပါ ဘာမှ ပြောစရာမလိုအောင် ပြည့်စုံလွန်းခဲ့တယ်။ ၂၀၁၅ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရယူခဲ့သလို အဲဒီရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ တစ်ရာသီအတွင်း ဖလား(၃)လုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။
၁.Di Stefano, Ferenc Puskas, Francisco Gento (ရီးယဲလ် – ၁၉၆၀)
ဒီစတီဖာနို၊ ပွတ်ရ်ှကပ်စ်၊ ယန်တိုတို့ အတွဲကတော့ ဥရောပဖလား(ချန်ပီယံလိဂ်) သမိုင်းမှာသာမကဘဲ ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းမှာပါ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်အတွဲအဖက်လို့ ပြောရမယ်။ ပြိုင်ပွဲအစောပိုင်းကာလတွေဖြစ်တဲ့ ၁၉၅၅-၅၆ ကနေ ၁၉၅၉-၆၀ အထိ ရီးယဲလ်အသင်း (၅)နှစ်ဆက်ဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး ဒါဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် စံချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းမှာ ဂန္ထ၀င်တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ရမယ့် တိုက်စစ်အတွဲတွေဆိုတာ အသင်းတိုင်းမှာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်းက ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲတွေဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့သူတွေပါပဲ။ ဒီတိုက်စစ်အတွဲအဖက်တွေထဲမှာ ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့တဲ့ အတွဲအဖက်က ဘယ်သူများလဲဆိုတာ ပြောခဲ့ပါဦး . .
Photo:Pinterest,The Independent,SPORTbible,Wikiwand,Ronaldo CR7,Twitter
ခနျြပီယံလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈ(၃)ဦးအတှဲ အပိုငျး(၂)
နာမညျကွီး ပွငျသဈဘောလုံးမဂ်ဂဇငျးက ခနျြပီယံလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးတိုကျစဈ (၃)ဦးအတှဲ (၁၀)တှဲကို ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီထဲကမှ အဆငျ့(၁၀)ကနေ (၆)အထိကို အပိုငျး(၁)ဖျောပွခဲ့ပွီး အခု အပိုငျး(၂)အဖွဈ ဆကျလကျဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
၅.Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale (ရီးယဲလျ-၂၀၁၄၊ ၂၀၁၆)
ရီးယဲလျအသငျး ခနျြပီယံလိဂျမှာ ပွနျလညျဦးမော့လာတာဟာ စီရျောနယျလျဒို၊ ဘနျဇီမာ၊ ဂါရတျဘေးလျတို့ရဲ့ BBC တိုကျစဈအတှဲကွောငျ့လို့ ပွောရငျ မမှားဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ အသီးသီး ဒဏျရာပွဿနာတှကွေောငျ့ ဒီ(၃)ဦး တှဲဖကျကစားခဲ့တဲ့ပှဲ အမြားကွီး မရှိခဲ့ပမေယျ့ BBC တိုကျစဈပှဲထှကျခဲ့တဲ့ ပှဲတိုငျးလိုလို ရလဒျကောငျး ရယူနိုငျခဲ့တယျ။
၄.Johan Cruyff, Pat Keizer and Johnny Rep (အဂေကျြဈ – ၁၉၇၃)
၁၉၇၃ ခုနှဈမှာ အဂေကျြဈအသငျး ဥရောပဖလားဆှတျခူးခဲ့ပွီး အဲဒီအောငျမွငျမှုမှာ ခရာကခြဲ့တာက ယိုဟနျခရိုကျဖျ၊ ပကျကိုငျဇာ၊ ဂြှနျနီရကျပျတို့ တိုကျစဈအတှဲပါပဲ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ဗိုလျလုပှဲမှာ သူတို့(၃)ယောကျက အကောငျးဆုံးခွစှေမျးပွခဲ့ပွီး အနိုငျဂိုးကို ဂြှနျနီရကျပျက ပှဲအစ(၅)မိနဈမှာပဲ သှငျးယူခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီရာသီကုနျမှာပဲ ယိုဟနျခရိုကျဖျက ဘာစီလိုနာကို ပွောငျးရှခေဲ့လို့ အဂေကျြဈအသငျးရဲ့ Deadly Trio တိုကျစဈအတှဲအဖကျ ပကျြသှားခဲ့ရပါတယျ။
၃.Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Wayne Rooney (မနျယူ – ၂၀၀၈)
မနျယူအသငျးကို ဖာဂူဆနျ Alex Ferguson ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ သကျတမျးတဈလြှောကျ ရှရငျဂမျ-ဒှိကျယော့ချ-အနျဒီကိုးလျ တို့ပွီး ဒုတိယအကောငျးဆုံး တိုကျစဈအတှဲအဖကျလို့ သတျမှတျရမယျ။ ၂၀၀၈ ခုနှဈမှာ မနျယူအသငျး ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ကိုငျမွှောကျခဲ့တာဟာ စီရျောနယျလျဒို၊ တီဗကျဇျ၊ ရှနျနီတို့ရဲ့ World Class Attacking Play တှကွေောငျ့ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ကစားပုံတှကေတော့ မနျယူပရိသတျတှအေတှကျ အမွဲတမျးလှမျးစရာဖွဈနဦေးမှာပါ။
၂. Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez (ဘာစီလိုနာ -၂၀၁၅)
MSN တိုကျစဈကတော့ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈအတှဲအဖကျလို့တောငျ သတျမှတျရမှာပါ။ တဈဦးခငျြးခွစှေမျးသာမက တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ နားလညျမှုအပိုငျးမှာပါ ဘာမှ ပွောစရာမလိုအောငျ ပွညျ့စုံလှနျးခဲ့တယျ။ ၂၀၁၅ ဗိုလျလုပှဲမှာ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူပွီး ခနျြပီယံလိဂျဖလားရယူခဲ့သလို အဲဒီရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ တဈရာသီအတှငျး ဖလား(၃)လုံးရရှိခဲ့ပါတယျ။
၁.Di Stefano, Ferenc Puskas, Francisco Gento (ရီးယဲလျ – ၁၉၆၀)
ဒီစတီဖာနို၊ ပှတျရျှကပျဈ၊ ယနျတိုတို့ အတှဲကတော့ ဥရောပဖလား(ခနျြပီယံလိဂျ) သမိုငျးမှာသာမကဘဲ ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးမှာပါ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈအတှဲအဖကျလို့ ပွောရမယျ။ ပွိုငျပှဲအစောပိုငျးကာလတှဖွေဈတဲ့ ၁၉၅၅-၅၆ ကနေ ၁၉၅၉-၆၀ အထိ ရီးယဲလျအသငျး (၅)နှဈဆကျဗိုလျစှဲခဲ့ပွီး ဒါဟာ သမိုငျးတဈလြှောကျ စံခြိနျလညျးဖွဈပါတယျ။
ဘောလုံးအသငျးတဈသငျးမှာ ဂန်ထဝငျတှအေဖွဈ သတျမှတျရမယျ့ တိုကျစဈအတှဲတှဆေိုတာ အသငျးတိုငျးမှာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ အခု ပွငျသဈမဂ်ဂဇငျးက ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ တိုကျစဈအတှဲတှဟော တဈခတျေတဈခါတုနျးက အကောငျးဆုံးခွစှေမျးပွခဲ့သူတှပေါပဲ။ ဒီတိုကျစဈအတှဲအဖကျတှထေဲမှာ ပရိသတျအကွိုကျတှတေဲ့ အတှဲအဖကျက ဘယျသူမြားလဲဆိုတာ ပွောခဲ့ပါဦး . .